အကောင်းဆုံးစာအုပ်ဆိုင်တွင်ဥရောပ | တစ်ဦးကရထား Save
အမိန့်တစ်ဦးကရထားလက်မှတ် NOW က
toggle menu ကို
ဘလော့ Post ကို
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အကောင်းဆုံးစာအုပ်ဆိုင်တွင်ဥရောပ
အားဖြင့် Liam Mallari
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 26/09/2020)
အဘယ်ကြောင့်လူတွေခရီးသွားတူအကြောင်းပြချက်များများရှိပါတယ်. သငျသညျအမြားဆုံးကိုမကြာခဏစကားကိုနားထောငျနိုငျသူမြားကိုတစျခုမှာအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှိသည်ဖို့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည် အတွေ့အကြုံများ. အဘယျသို့ခရီးသွားလာနိုင်အောင်လှပသောစေသည်ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမည်ဖြစ်ပါသည်. Adrenaline junkies ယူပါ တက်ကြွအားလပ်ရက်, အနည်းငယ်အန္တရာယ်များအခြေအနေများ၏စိတ်လှုပ်ရှားရှာဖွေနေ. အစားကောင်းကြိုက်သူများ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုအရသာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပြား၌မွေ့လျော်ဖို့နေရာသစ်သွားရောက်ကြည့်ရှု. ထိုအခရီးသွားများအတွက်တို့တွင် bookworms များအတွက်, စာကြည့်တိုက်နှင့်စာအုပ်စတိုးဆိုင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးသောအရပ်တို့ကိုမဖွစျနိုငျ. သငျသညျဥရောပမှတဆင့်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ရထားသွားရောက်ဥရောပအကောင်းဆုံးစာအုပ်စတိုးဆိုင်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အအနည်းငယ်ကိုအကြံပြုချက်များရှိ:
ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရန်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့သဖြင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် တစ်ဦးကရထား Save, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
ပြင်သစ်အကောင်းဆုံးစာအုပ် Stores – ရှိတ်စပီးယား & ကုမ္ပဏီ, ပဲရစ်
ပြင်သစ်တစ်ဦးကြည်နူးဖွယ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်, နှင့် ပဲရစ် ၎င်း၏အကျော်ကြားဆုံးဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်. အနုပညာအမျိုးအစားများကိုပဲရစ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ, Notre Dame စိတ်ထဲမှကြွလာ, လှပသောရေပေါက်ရေတွင်းများနှင့်ချယ်ရီသစ်ပင်များအတွက်အတူ အပွင့်. သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဒါဟာအတိအကျသငျသညျကိုတှေ့လိမျ့မညျမြင်ကွင်းကိုဖြစ်ပါသည် ရှိတ်စပီးယား & ကုမ္ပဏီ, စာအုပ်များအတွင်းမှ၏စိတ်ကူး ambiance နှင့်အတူ.
အတော်များများကအကြီးအစာရေးဆရာများ (Ernest Hemingway နှင့်ဗော်တဲယားအပါအဝင်) ဒီ 17 ရာစုအဆောက်အဦများတွင်ရေးသားခြင်းအချိန်ကုန်ရပြီ. အဆိုပါ တောတောင်ရှုခင်း အဟောင်းကိုစင်ပေါ်နှင့်စာအုပ်ဖွင့်ထား, အလွန်သေးငယ်သောခန်းနှင့် Nook များစွာသောလူသို့ stacked. အဆိုပါစာအုပ်စတိုးဆိုင်နှစ်ခုကျော်ကြမ်းပြင် sprawls, နှင့်ပြင်ပကနေထက်အများကြီးသေးငယ်ပုံရသည်. ရှိတ်စပီးယား & ကုမ္ပဏီလည်းညဦးယံအချိန်ဖြစ်ရပ်များနှင့်စာရေးဆရာဖတ်အိမ်ရှင်အဖြစ်, စာပေဒမျှချစ်မြတ်နိုးတဲ့လက်လွတ်သင့်တယ်တစ်ခုခုအရာဖြစ်ပါသည်.
ပဲရစ်ရထားမှ Tours မှ
Acqua Alta စာကြည့်တိုက်, ဗင်းနစ်
ဗင်းနစ်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် စိတ်ကူးယဉ်တတ်သော အတွက်ရှာဖွေနေမြို့ကြီးများ အီတလီ, ထိုသို့လည်းဥရောပတိုက်တွင်အကျော်ကြားဆုံးအကောင်းဆုံးစာအုပ်စတိုးဆိုင်တနေရာဖြစ်သည်. Libreria Acqua Alta ရေချိုးကန်ထဲမှာစာအုပ်တွေသိုလှောင်ဘို့လူသိများနှင့်ပင်ကောင်းကင်ကြိုးဖြစ်ပါသည်. အခြားအသိုလှောင်မှုသောနေရာများလည်းရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောပုံးနှင့်အခြား floating ရေယာဉ်များအဖြစ်. ဒါဟာအစက၎င်း၏နောက်ကျောကနားပြင်ပေါ်အဟောင်းစာအုပ်လုံးဝလုပ်မယ့်လှေကားတပ်ဆင်ထား.
ယင်း၏လှပသောအတွင်းပိုင်းနှင့်အတူ, အမြင့်ရေအတွက်စာကြည့်တိုက် ဗင်းနစ်တစ်ဦးအလည်အပတ်ခြောရကျိုးနပ်သည် နှင့်မည်သည့်စာအုပ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျကိုယျအဘို့ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိနှင့်အတွင်းပိုင်းကိုဆုံးရှုံးရခဲ့လျှင်, သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားအဖြစ်မကြာမီပြုလုပ်နံနက်ယံ၌ဖွင့်လှစ်ကဲ့သို့ရှိမယ့်.
Selexyz ဒိုမီနီကန်ဘုရားကျောင်းစာအုပ် Store က, Maastricht
နယ်သာလန်နိုင်ငံ Maastricht တိုင်းခရီးသွားဆန္ဒစာရင်း၏ထိပ်ဆုံးအပေါ်မဖွစျစခွေငျးငှါ. သို့သျောလညျး, သငျသညျစာအုပ်စတိုးဆိုင်များနှင့်စာအုပ်များချစ်ကြလျှင်ကြောင့်အထူးသဖြင့်ဖြစ်သင့်. ဒိုမီနီကန် သို့မဟုတ်ဤမွို့၌ Selexyz ဒိုမီနီကန်ဘုရားကျောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 700 Gothic အဘိဓါန်များ၏ကွဲပြားစတိုင်များ built-in နှစ်အရွယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ဗိသုကာအတတ်ပညာ.
ဒါဟာအတွင်းပိုင်းအပေါ်ပြင်ပနှင့်ရိုးရှင်းသောအပေါ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်. Dominicanen လည်းမဆိုစာအုပ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့နှလုံးမွေ့လျော်မည်ကိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုအလုံးအရင်းနှင့်အတူလျှံနေသည်. သင်တစ်ဦးဖမ်းပြီးနိုင်ပါတယ် ကော်ဖီ ပူးတွဲကဖီး၌သင်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်နေစဉ်. တစ်နည်းအားဖြင့်, သငျသညျထိပ်ကြမ်းပြင်ကနေစိတ်ကူးအမြင်ခံစားနိုငျ.
Maastricht ရထားမှ Antwerp
Maastricht ရထားမှ Liege
Charleroi Maastricht မှရထား
ချက်ပြုတ် & စာအုပ်, ဘရပ်ဆဲလ်, Woluwe-Saint-လမ်းဘတ်
ချက်ပြုတ် & စာအုပ်တစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စာအုပ်စတိုးဆိုင်ဖြစ်ပါတယ် စားသောက်ဆိုင် တည်ရှိသော Woluwe-Saint-လမ်းဘတ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ. အများအပြားကအကောင်းဆုံးစာအုပ်စတိုးဆိုင်အချို့ပူဇော်နေစဉ် အစားအစာနှင့်သောက်, ချက်ပြုတ် & စာအုပ်နည်းနည်းနောက်ထပ်အယူအဆကြာ. ဒါဟာသင်အမျိုးမျိုးသောစာအုပ်တွေကဝိုင်းတစ်မုန့်ညက်အဘို့ဆင်းထိုင်ဖို့ခွင့်ပြု. ဒါကြောင့်ကောင်းသောစာအုပ်များနှင့်ကောင်းသောအစားအစာနှစ်မျိုးလုံးကိုခံစားလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာအရပ်စေသည်. ပိုကဘာလဲ, ဒါဟာဆက်ဆက်သင်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတွေ့ကြုံခံစားနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး.
အဆင်သင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးအချို့စာအုပ်ဆိုင်တွင်ဥရောပ? သငျသညျပဲရစ်စ်နှင့်ဗင်းနစ်မှရထားဖြင့်သွားလာနိုင်ပါတယ်, အဖြစ်ကောင်းစွာနယ်သာလန်နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအဖြစ်. သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူ အစောပိုင်းနှင့်သင့်လာမည့်အားလပ်ရက်ပေါ်တွင်သင်၏စာအုပ်အလိုလိုကျလှနျးခွငျးစီစဉ်စတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-book-stores-europe%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, သင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်အဆိုပါ/ဆင်ရန်/ဒုိး/သင့္ေတာ္ေသာပိုပြီးဘာသာစကားများ.
#စာအုပ် #စာအုပ်များ #စာအုပ်ဆိုင် #စာအုပ်ဆိုင် #traveleurope
ကြှနျတေျာ့ blog ကိုအရေးအသားအလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာရဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, သုတေသနပြု, နှင့်ပညာရှင်ပီသစွာအကြောင်းအရာတိကျမ်းစာ၌လာသည်, ငါဖြစ်နိုင်သည်လုပ်နိုင်အဖြစ်ဆက်ဆံအဖြစ်လုပ်ရန်ကြိုးစား. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ရထား Travel အီတလီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
ဥရောပ၌ Tipping ရန် Ultimate လမ်းညွှန်
ရထားခရီးသွားခြင်း, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
ထိပ်တန်း5လူဇင်ဘတ်ရန်တစ်ဦးက Short ခရီးစဉ်တွင်လုပ်ဖို့အမှုအရာ
ရထားခရီးသွားလူဇင်ဘတ်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
10 တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန် Epic နေရာများ
မူပိုင်ခွင့်© 2020 - တစ်ဦးကရထား Save, အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
ဒီ module ကိုပိတ်ပြီး
လက်ဆောင်မရှိဘဲစွန့်ခွာမနေပါနဲ့ - ကူပွန် Get နှင့်သတင်းများ !
ယခုဝင်မည် - ကူပွန် Get နှင့်သတင်းများ !